ရင်နင့်စရာ အဖြစ်တွေအတွက် ဖြေဆည်စရာရှိပါရစေ - Young Insurance General
Home » Article » ရင်နင့်စရာ အဖြစ်တွေအတွက် ဖြေဆည်စရာရှိပါရစေ
ရင်နင့်စရာ အဖြစ်တွေအတွက် ဖြေဆည်စရာရှိပါရစေ
Category : Article, Insurance | Date : March 4, 2020
ဟိုနေရာ မီးလောင်တယ် လောင်ကျွမ်းမှု အဆင့်(၅) အထိရှိတယ်. ဒီနေရာ မီးလောင်တယ် လောင်ကျွမ်းမှု အဆင့်(၄) အထိရှိတယ်. ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုး သိန်းရာချီတယ်. ဒီလို မီးလောင်မှုတွေ ခဏ ခဏ ဖြစ်နေတာကို ကြားရသူတွေတောင် စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရတာ ကာယကံရှင်တွေဆိုရင် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေအတွက် ဘယ်လောက်တောင် ရင်နင့်နေရမလဲ?…
မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ကပြောဖူးတယ် သူတို့ရက်ကွက်ထဲက အိမ်တစ်လုံး မီးထလောင်လိုက်တာ သူ့အိမ်ကလူတွေလည်း စုဆောင်းထားတာလေးတွေ သိမ်းစည်းကြရင်း ယောက်ယက်ကိုခပ်သွားတာပဲ တဲ့. မှန်တာပေါ့လေ ကိုယ့်ရပ်ကွက်ထဲက အိမ် ၊ ကိုယ့်ဘေးချင်းကပ် အိမ် တွေမှာ မီးလောင်မယ်ဆိုရင်တောင် ကိုယ့်အိမ်ကို အချိန်မရွေး မီးကူးလာနိုင်လို့ ရင်တမမနဲ့စိတ်ပူကြရတာပါပဲ.
ဒါကြောင့် မီးလောင်မှု အန္တရာယ်ကနေ ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ဖို့ မီးကို ရိုရိုသေသေ စနစ်တကျ အသုံးပြုဖို့လိုသလို မီးလောင်မှုကို အကာအကွယ်ပေး နိုင်မယ့် မီးအာမခံ ဝန်ဆောင်မှုကိုလည်းရယူထားသင့်ပါတယ်…
မီးလောင်မှုကြောင့် ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ ပျက်စီးခဲ့ရင် နစ်နာဆုံးရှုံးမှုတွေအတွက် ကာကွယ်ပေးမယ့် ယမ်းအာမခံ ရဲ့ မီးနှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်အာမခံဝန်ဆောင်မှု (Property Insurance) ကိုရယူထားမယ်ဆိုရင်တော့ ရင်နင့်စရာ အဖြစ်တွေအတွက် ဖြေဆည်ဖွယ်ရာ အထောက်အပံ့တွေ ရရှိနိုင်မှာပါ…
? မီးနှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်အာမခံ ဆိုတာ?…?
☑လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ နှင့် ကုန်ပစ္စည်းများ
အာမခံသက်တမ်း (၁၀)ရက်မှ (၁)နှစ်အထိ
☑ရေကြီးခြင်း၊ ရေလျှံခြင်း ၊ မြေပြိုခြင်း၊ မြေကျွံခြင်း
☑ဖောက်ထွင်းခိုးယူမှု နှင့် စစ်ဘေးအန္တရာယ်
✅ပိုင်ရှင် ၊ ပူးတွဲပိုင်ရှင်
? မီးနှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်အာမခံအကြောင်း အသေးစိတ်သိရှိပြီးပြီဆိုတော့ … နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများ မဖြစ်ပေါ်ရအောင် ကျွန်တော်တို့ ယမ်းအာမခံနှင့်လက်တွဲလုပ်ဆောင်ဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ….?♂?
← အကာအကွယ်လား အကာအရံလား | မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပျောက်ဆုံးမှု အာမခံလျော်ကြေးငွေ (၁,၃၀၀,၀၀၀) ပေးအပ်ခြင်း →